July 28, 2021 - ApannPyay Media
July 28, 2021 by ApannPyay Media
ဆံကေသာ ကို ၁၀ ရက်အတွင်း ပြန်လည်သန်စွမ်းစေမယ့် နည်းလမ်း လေးတွေ ဆံကေသာ ဆိုတာ ကျွန်မတို့ မိန်းကလေး ရဲ့ ဒုတိမျက်နှာပါပဲ။အလှအပဆိုရာမှာ ဆံကေသာ ၏ကောင်းခြင်းကို မေ့ထားလို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆံသား တွေဟာ ကိုယ်နေ့စဉ်ထိတွေ့နေရတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့် ကြမ်းတမ်းပျက်စီးနေတာ လူတိုင်းအသိပါပဲ။ ဆံကေသာကို ၁၀ ရက်အတွင်း ပြန်လည်သန်စွမ်းစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း လေးတွေကို မျှဝေပေးပါ မယ်။ ၁။ စားသုံးပေးသင့်တဲ့ အစားအစာ တွေ ၁၀ ရက်အတွင်း သံဓာတ် ၊ ပရိုတင်းဓာတ်၊ သတ္တုဓာတ်၊ အိုမီဂါ ၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်စတဲ့ အဟာရဓာတ်တွေပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားသုံးပေးပါ။ အစား အဟာရဟာ ဆံကေသာ ကောင်းခြင်းအတွက်အရေးပါပပါတယ်။ ၂။ ဦးရေပြား ကို နှိပ်ပေးမယ်။ … Read more
“အဆိုတော်တင်ဇာမော် ရဲ့ မိခင် ကွယ်လွန်”
“အဆိုတော်တင်ဇာမော် ရဲ့ မိခင် ကွယ်လွန်” အဆိုတော် တင်ဇာမော်ရဲ့ မိခင် ယနေ့ ကွယ်လွန်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ တင်ဇာမော် က လူမှုကွန်ယက်မှာ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ပတ်သက်လို့ ရေးသားထားတာက…… ” မေမေ‌ရေ…မေမေ့ကို သမီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးမယ်နော်..ဟယ် သမီးက မေမေ့ဒီနားလေးကနေထွက်လာတာနော်။ဟုတ်တယ်မို့လားမေမေ.. ခုတော့ မေမေက သမီးရဲ့ ကလေးလေးနော် ပိုးလေးလိုမွေးထားရတာနော်.. အားတင်းထားပေးနော်မေမေ… တစ်ကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာ မေမေအရမ်းပင်ပန်းလှပါပြီ..။အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ ဆရာ၊ဆရာမတွေ၊ အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေး အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ဆွေမျိုး၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း၊ ပရိသတ် များအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ မေမေ ကောင်းရာဘုံဘဝမှာ အေးငြိမ်းချမ်းသာပါစေ 28.07.21 10:50PM” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။ Credit “အဆိုေတာ္တင္ဇာေမာ္ ရဲ့ မိခင္ ကြယ္လြန္” အဆိုေတာ္ တင္ဇာေမာ္ရဲ့ မိခင္ ယေန႔ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္းသိရပါတယ္။ တင္ဇာေမာ္ က … Read more
ဒီကပ်ထဲ ပါမသွားအောင် ဂုန်မင်း နဲ့ ငါး များများစားထားကြပါ
ဒီကပ်ထဲ ပါမသွားအောင် ဂုန်မင်း နဲ့ ငါး များများစားထားကြပါ ဒီဝါဆို စ သိမ်းမယ် တဲ့(လပြည့်ကျော်တာနဲ့ အထူးသတိထားပါ) နဂါးတွေ ဂဠုန် တွေပါ ပါလာမှာမို့ လေတွေ ရေတွေပါ လာမှာတံပြက်စည်းလှည်းတာဝါဆိုက စပြီး ခမ်းကြမ်းကြမ်းလှည်းမယ် ကံနည်းသူတွေရော ဥာဏ်နည်းသူတွေပါ အကုန်ပါမယ် ရှစ်ပက္ခ ကျော်သွားရင် သာသနာအတွက် စိတ်ချရပြီ မိစ္ဆာတွေ နဲ့ ဝိဇ္ဇာ တွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တိုက်ကြတော့မှာမို့ မိစ္ဆာတွေ ထွက်ခတ်ခက်လိမ့်မယ် အထူးသတိထားကြပါ ဒီကပ်ထဲ ပါမသွားအောင် ဂုန်မင်း နဲ့ ငါး များများစားထားကြပါ ဒီရက်တွေမှာ ခွေးတွေအဆမတန်အူမယ် လူတွေ ကြောက်စိတ်တွေဝင်မယ် ကြက်သီး တွေထမယ် အိပ်နေတုန်းခဏခဏလန့်နိုးလိမ့်မယ် အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်မယ် ဂုဏ်တော်များများပွားကြ ရတနာသုံးပါး စော်ကားသူတွေ ပါးစပ်က ဘုရားတလာတဲ့အထိပဲ … Read more
ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး အရှင်ဇေယျသိဒ္ဓိဓမ္မဉာဏိက ၏ ကပ်ဘေးကြီးတွေဖြစ်လာရင် ​ပြုလုပ်ရမည့် နည်းလမ်း
ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး အရှင်ဇေယျသိဒ္ဓိဓမ္မဉာဏိက ၏ ကပ်ဘေးကြီးတွေဖြစ်လာရင် ​ပြုလုပ်ရမည့် နည်းလမ်း တစ်နေ့က ရွှေပေါ်ကျွန်းဆရာတော်ကြီး အရှင်ဇေယျသိဒ္ဓိဓမ္မဉာဏိက ရှိတော်မူစဉ်က ကပ်ဘေးကြီးတွေဖြစ်လာရင် ​ပြုလုပ်ရမည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကို…. ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိစဉ် အနီးကပ်ပြုစုလုပ်ကိုင်၍ ပညာသင်​လေ့လာပြီး ဆရာတော်ကြီး ခန္ဓာဝန်ချသည်အထိ နေထိုင်ကာ ယခုအချိန်ထိ ဆရာတော်ကြီး လမ်းညွှန်ချမှတ် လမ်းပြ စေခိုင်းလျက်ရှိသော ကျင့်စဉ်များကို ဆက်လက်အားထုတ်နေသော အဘတစ်ဦးက ဖုန်းဆက်ကာ လုပ်ကိုင်ရမယ့် အစီအစဉ်​တွေကို ပြောပြပါတယ်။ ကိုယ့်အနားက ယုံကြည်ပြီး လုပ်မယ့်သူတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြောပြပါလို့ ခွင့်ပေးတော်မူလို့ ဓမ္မမိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့ကို လက်ဆင့်ကမ်း မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိအိမ်ရှိ လင်ပန်းတစ်ခုထဲတွင် အလင်းတိုင်ကို အိမ်ရှိ လူအရေအတွက်အတိုင်း အသက်ကြီးတဲ့သူကနေစပြီး ထွန်းပါ။ ပြီးရင် ရေထည့်ပါ။ ညစဉ် ၇ နာရီတိုင်း ထွန်း၍ ပူဇော်ပါ။ ၃ … Read more
အောက်စီဂျင်အတွက် အခက်အခဲတွေများစွာရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ သိန်း (၅၀၀)လှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ် Covid -19 ရောဂါကြောင့် အောက်ဆီဂျင် မလုံလောက်တဲ့ ပြဿနာတွေကို နေရာ အနှံ့အပြားက ပြည်သူတွေ အလူးအလဲ နေ့ရော ညရော ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်နေကြရပါ တယ် ။ အောက်ဆီဂျင် ပြတ်လပ်မှုတွေကြောင့် အသက်သေဆုံးနေကြတာကိုလည်း စိတ်မကောင်းစွာ တွေ့မြင်ကြရမှာပါ ဒါ့ကြောင့် ခုဆိုရင် တတ်နိုင်သလောက် အလှူရှင် ပြည်သူတွေ အသင်း အဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းပြီး အောက်ဆီဂျင် လုံလောက်အောင် ဝယ်ယူလှူဒါန်းမှုတွေ ၊ စက်ရုံတည်ဆောက်မှုတွေ ပြုလုပ်နေပါပြီ။ ဒီလို လှူဒါန်းကြသူတွေအထဲမှာ စမိုင်းလ်လည်း အပါအဝင်ပါပဲ ။ စမိုင်းလ်က အောက်ဆီဂျင်ဝယ်ယူရန် အတွက် အလှူငွေ သိန်း (၄၀၀) အပြင် စက်ရုံဆောက်လုပ် အတွက်ပါ သိန်း … Read more
လက်မောင်းကပ်ရောဂါ နဲ့ ကုသနည်းများ လက်ကိုဆန့်တန်းမြှောက်လျှင်နာသည်။နောက်ကျောပြင်ကုပ်လျှင်အပေါ်အထိမရ။အမျိုးသမီးများ ဆံပင်ထုံးမရ။ဇက်ကျီးပေါင်းရှိလျှင်လည်းဖြစ်တတ်သည်။တစ်ဘက်သပ်ဖိအိပ်လေ့ရှိသူများတွင်လည်းဖြစ်တတ်သည်။ ညာဘက်ဖြစ်လျှင်ပျောက်လွယ်သည်။အသုံးပြုနေ၍။ဘယ်ဖက်ဖြစ်လျှင်ပိုကြာသည်။ အသုံးနည်း၍။(သန်ရာလက်ကိုဆိုလိုပါသည်။ ဘယ်သန်လျှင် . ညာပျောက်ခဲမည်) အနှိပ်ခံစရာမလိုပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်လျှင်၁၄ ရက်အတွင်းသက်သာပျောက်ကင်းနိုင်ပါသည် ။ဆားကြပ်ထုပ်ထိုးနိုင်ပါသည်။ မိဿလင်ကြပ်ထုုပ်ကတော့အကောင်းဆုံးပါ။ ရေနွေးငွေ့ခံထိုးပါ။ အပူခံနိုင်ရုံသာထိုးပါ။မုံညှင်းဆီလိမ်းပြီးထိုးလျှင် ချောမွေ့ပြီး အပူလောင်သက်သာသည်။ ဇက်ကျီးပေါင်းနေရာတွင် သင်္ဘောရွက်မီးကင်ပြီးကပ်ပေးပါ။ဘန်ဒါရွက်(ဗာဒံရွက်)ကပ်လျှင်လည်းရသည်။ချင်းခြောက်မှုံ့ ၃ဆ၊လင်းနေမှုံ့ ၁ဆ ၊ သစ်ကြမ်းပိုးအခေါက်မှုံ့၁ဆ ရော ရေနွေးနှင့်ဖျော် လက်မောင်းဆုံတွင်အုံစည်းလျှင်လက်မောင်းကပ်ရောဂါပျောက်ပါသည် ။ ကြည်လွင်မြင့်(မုဒြာ) လက္ေမာင္းကပ္ေရာဂါ နဲ႔ ကုသနည္းမ်ား လက္ကိုဆန႔္တန္းေျမႇာက္လွ်င္နာသည္။ေနာက္ေက်ာျပင္ကုပ္လွ်င္အေပၚအထိမရ။အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆံပင္ထုံးမရ။ဇက္က်ီးေပါင္းရွိလွ်င္လည္းျဖစ္တတ္သည္။တစ္ဘက္သပ္ဖိအိပ္ေလ့ရွိသူမ်ားတြင္လည္းျဖစ္တတ္သည္။ ညာဘက္ျဖစ္လွ်င္ေပ်ာက္လြယ္သည္။အသုံးျပဳေန၍။ဘယ္ဖက္ျဖစ္လွ်င္ပိုၾကာသည္။ အသုံးနည္း၍။(သန္ရာလက္ကိုဆိုလိုပါသည္။ ဘယ္သန္လွ်င္ . ညာေပ်ာက္ခဲမည္) အႏွိပ္ခံစရာမလိုပါ။ ေလ့က်င့္ခန္းမွန္မွန္လုပ္လွ်င္၁၄ ရက္အတြင္းသက္သာေပ်ာက္ကင္းႏိုင္ပါသည္ ။ဆားၾကပ္ထုပ္ထိုးႏိုင္ပါသည္။ မိႆလင္ၾကပ္ထုုပ္ကေတာ့အေကာင္းဆုံးပါ။ ေရေႏြးေငြ႕ခံထိုးပါ။ အပူခံႏိုင္႐ုံသာထိုးပါ။မုံညႇင္းဆီလိမ္းၿပီးထိုးလွ်င္ ေခ်ာေမြ႕ၿပီး အပူေလာင္သက္သာသည္။ ဇက္က်ီးေပါင္းေနရာတြင္ သေဘၤာ႐ြက္မီးကင္ၿပီးကပ္ေပးပါ။ဘန္ဒါ႐ြက္(ဗာဒံ႐ြက္)ကပ္လွ်င္လည္းရသည္။ခ်င္းေျခာက္မႈံ႕ ၃ဆ၊လင္းေနမႈံ႕ ၁ဆ ၊ သစ္ၾကမ္းပိုးအေခါက္မႈံ႕၁ဆ … Read more
အပေါင်ဆိုင်က ပြန်မရွေးနိုင်တော့သည့် စက်ဘီးနှင့် ဆိုက်ကားများကို အခမဲ့ ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ မြန်မာသူဌေး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပုသိမ်ခရိုင်၊ ငသိုင်းချောင်းမြို့၌ ပထမဦးဆုံး စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် အပေါင်ဆိုင် က မရွေးနိုင်တော့သည့် အပေါင်ခံထားတဲ့ စက်ဘီးနှင့် ဆိုက်ကားများကို ပေါင်နှံသူများအား အခမဲ့ ပြန်လည် ပေးအပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲဖြစ်နေသော အခြေခံလူတန်းစားများ လာရောက် ပေါင်နှံထားသည့် စက်ဘီးနှင့် ဆိုက်ကားများ လာရောက်ရွေးယူခြင်း၊ အတိုးသတ်နိုင်တော့ခြင်းတို့ကြောင့် ပြန် လည် လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အပေါင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ မခင်မာကြူက ပြောပါတယ်။ အဆိုပါ စက်ဘီးနှင့် ဆိုက်ကားများ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းကို ယမန်နေ့ (နိုဝင်ဘာလ ၂၃) ရက် မွန်းလွဲပိုင်း ကစ၍ ပေါင်ထားသည့် ဘောက်ချာ ပြနိုင်သူများအား … Read more
ရေဖျဉ်းရောဂါအတွက် မြန်မာ့ဆေးနည်းများ( ရေဖျဉ်း ပေခင်း ) ဆရာကြီး အစည်းအဝေးတက်လာနိုင် ်တာဝမ်းသာတယ်ဗျာ˝ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးဆရာကြီး ရေဖျဉ်းရေဂါဖြင့်အိပ်ရာထဲလှဲခဲ့ရသည်။မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် သက်သာပျောက် ်ကင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆေးနည်းမှာ ပေပင်၏အရွက်ကို အိပ်ရာအောက်ခင်းပြီးအိပ်ပေးခြင်းညဉ့်အိပ်စဉ် ပေရွက်ပတ်၍အိပ်ခြင်းပေရွက်ကို (၃)ခွက်(၁)ခွက်တင် ဆေးကျိုပြီးသောက်ပေးခြင်း ထိုအပြင်အရှင်နာဂသိန်ဆေးကျမ်းမှပြဆိုထားသော ဇော်ဂျီခါးပုံစ၊ ခေါ်ဗြဟ္မာခါးပုံစ ခေါ်သူယောင်ဂမုန်းကြောင့်လည်းပါသည်။ ရေဖျဉ်းရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေသည်မှာ ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ကြောင်း ဆေးကျမ်းတွင် ဖေါ်ပြ ထားသည်။ ဇော်ဂျီခါးပုံစအား အရွက်ကိုကျက်ရုံပြုတ်၍ ပါးပါးလှီးကာ မန်ကျည်းရည်၊ကြက်သွန်နီ၊ကြက် ်သွန်ဖြူ၊ပုဇွန်ခြောက်တ ို့ထည့်ပြီး ရေဖျဉ်းဝေဒနာရှင်ကို လက်သုပ်လုပ်ပြီးကျွေးရပါသည်။ ထိုပြင် ပြုတ်ရည်ကို ဟင်းချိုချက်၍လည်းတိုက် ရသည်။ (၇)ရက်တစ်ကြိမ်ဝမ်းနုတ်ပေးပါ။၎င်းနည်းဖြင့် ဆေးရုံကလက်လွတ်လိုက်ရသော ရေဖျဉ်းရောဂါသည်တို့ပျောက်ကင်းကြသည် ဟု အရှင်နာဂသိန်ဆေးကျမ်း ပုံပြဆေးအဘိဓာန်တတိယတွဲ စာမျှက်နှာ(၃၄၂)တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဘိုးဝါးယမနှင့်ဆေးပင်ရှာပုံတော်ခေါင်းစဉ်ဖြင့်(ရေဖျဉ်း ရောဂါပျောက်ကင်းပုံ)ဖေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် (၁)ပေရွက်ကိုခင်း၍ ဗိုက်ကိုပတ်ပြီးအိပ်ပေးပါ။ (၂)ပေရွက်ကို (၃)ခွက်(၁)ခွက်တင်ပြုတ်ကျိုသောက် … Read more
အခုချက်ခြင်း သောက်ဖြစ်အောင်သောက်လိုက်ပါ Vietnam ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်သစ်သည်သေဆုံးနှုန်းလုံးဝသုညရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူများသည်စူပါနိုင်ငံဗီယက်နမ်၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်။ သင်သည် ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်နှင့်အတူကူးစက်ရင်တောင်သေမှာမဟုတ်သည်မှာသေချာသည်။ အချက်အလက်များစွာကဖော်ပြချက်သည်အလွန်ရိုးရှင်းသည်ဟုသက်သေပြသလိုလည်းအထူးသဖြင့်ထိရောက်မှုရှိသည်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစူပါကုထုံး၏လျှို့ဝှက်ပုံသေနည်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် ၁။ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းကိုရေပွက်ပွက်ဆူတွင်ပြုလုပ်ပါ။ ၂။ သံပုရာဖျော်ရည်ကိုရောစပ်ပြီးနောက်လက်ဖက်ရည်ပူသောက်ပါ။ ၃။ ဤလျှို့ဝှက်ချက်သည် ကိုရိုနာ သစ်ကိုချက်ချင်းသေစေနိုင်သည်။ ၄။ ကျွမ်းကျင်သူများကစစ်ဆေးပြီးနောက်-ဗိုင်း ရပ်စ်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှလုံးဝဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။ ၅။ အခြေခံမူမှာဤပါဝင်မှုနှစ်ခု၏ပုံသေနည်းသည်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို alkaline ဖြစ်စေသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညဉ့်အခါမှာတော့ခန္ဓာကိုယ်စနစ်ဟာအက်ဆစ်ဓာတ်ဖြစ်လာပြီးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုလည်းလျော့နည်းသွားစေလို့ပဲ။ ၆။ လူတိုင်းသည်ညနေခင်းတွင်ရေနွေးတစ်ခွက်နှင့်သံပုရာအနည်းငယ်သောက်သုံးပြီး၎င်းမှော်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလူတိုင်းအားဝေမျှပေးသည်။ သို့သော်အကန့်အသတ်မဲ့တန်ရာရှိသည်။ဤရိုးရှင်းသောဖော်မြူလာသည်အလွန်ထိရောက်သောကြောင့်၎င်းသည် ကိုရိုနာ အသစ်အားမကူးစက်နိုင်ပါ။အတွင်းပိုင်းလျှို့ဝှက်ချက် သူငယ်ချင်းများကနောက်မှသိမ်းထားနိုင်သည်။ သင်သည်သင့်ကို ကိုရိုနာ နှင့်အတူကူးစက်ခံခဲ့ရကြောင်းသင်မည်သို့သိသနည်း ၁။ ယားယံသောလည်ချောင်း ၂။လည်ချောင်းချောက်ကပ်ခြင်း ၃။ချောင်းချောက်ဆိုးခြင်း ၄။မြင့်မားသောခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် ၅။အသက်ရှုတိုခြင်း ၆။အနံ့ဆုံးရှုံးမှု ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်အဆုတ်ကိုမကူးစက်မီသံပုရာနှင့်နွေးသောရေသည်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ဤအချက်အလက်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများထံပို့ပေးပါ။(ခုချက်ခြင်းကို လုပ်သောက်လိုက်ပြီလေ ဓါတ်ပုံပါ ရိုက်ထားတယ် အမျိုးတွေ သောက်ဖြစ်အောင်သောက်ကျပါ )credit အခုခ်က္ျခင္း ေသာက္ျဖစ္ေအာင္ေသာက္လိုက္ပါ … Read more
အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကအုပ်စုပွဲစဉ်(၂)ပွဲဆက် ရှုံးခဲ့တာကြောင့် နှုတ်ထွက်ခဲ့ရပြီး အိမ်ပြန်ရတော့မယ့် သက်ထားသူဇာ လက်ရှိ ကျင်းပနေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင်မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအားကစားသမား နှစ်ဦးသာဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မနက်ပိုင်းက အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းကြက်တောင်ပြိုင်ပွဲ အုပ်စုအဆင့် နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာတော့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကြက်တောင်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာတစ်ယောက် ဘယ်လ်ဂျီယံကြက်တောင်မယ် Lianne Tan ကို နှစ်ပွဲပြတ်ဖြင့် ရှုံးနိမ့်သွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အုပ်စုပွဲစဉ် (၂) ပွဲကစားအပြီး ပထမပွဲစဉ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားကစားသမားကို နှစ်ပွဲပြတ်ဖြင့်ရှုံးရုံတင်မကဘဲ အခုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာလည်း ဘယ်လ်ဂျီယံကစားသမားကို နှစ်ပွဲပြတ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး အိမ်ပြန်လာရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်တွေမှာ အုပ်စုထဲက ပထမရရှိသူတစ်ဦးတည်းကိုသာ နောက်တစ်ဆင့် တက်ရောက်ခွင့်ရှိတာကြောင့် သက်ထားသူဇာတစ်ယောက် ဒီအဆင့်မှာတင် ရှုံးနိမ့်ပြီး ဝမ်းနည်းစွာဖြင့် နောက်လှည့်ပြန်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်ထားသူဇာဟာ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိဖို့ကို နှစ်တွေချီပြီး မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ အိမ်မက်ဖြစ်တာကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေများစွာခံနေရတဲ့ကြားက သွားရောက်ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တာ … Read more